I izinhlobo ezinkulu zolwazi nobuchwepheshe
Imininingwane ubuchwepheshe zenzelwe ukubonakalisa izinqubo ezihlobene ne-idatha. Zifaka: ukuqoqwa ukubhalisa, ukucubungula nesilondoloze, kanye search, isitoreji, ukuhlaziywa, isizukulwane, kutfunyelwa nekusatjalaliswa.
Ngaphambi kokuba ucabangele izinhlobo zolwazi nobuchwepheshe, kubalulekile ukuchaza nazo zonke isikhonzi yayo imiqondo. Ngu lokuqoqa baqonde yokubhalisa, nenkanuko edlulele kanye ukurekhoda idatha ifomu enemininingwane lezinto, imicimbi, izibaluli, izenzo, kanye nobudlelwane. Ngaphansi ukucutshungulwa ubuchwepheshe ke libhekisela ukulandelana ngaphambilini yezenzo ukuthi lwenziwa kusukela ekuqaleni idatha ukuze uthole imiphumela. Icubungula Imininingwane kuyinto isilawuli ukuguqulwa kwalo okwalandela.
Ngaphezu kwalokho, kufanele ishiwo izinhlobo. Lezi zinhlobo ezilandelayo kolwazi nobuchwepheshe bungabonakala (kwasekuqaleni kufanele ihlukaniswe ngokuvumelana imisebenzi yabo ekuqinisekiseni imisebenzi yokuphathwa):
- ukulungiselela ubuchwepheshe kumadokhumenti ngamafomethi ahlukene ngesisekelo abahleli abafanele (umbhalo, izithombe, njll);
- ukuthuthukiswa software ubuchwepheshe esekelwe into-ngamakhasimende, ngekulandzelana algorithmic izilimi izinhlelo;
- ukuphathwa yesondlo izixazululo nge ukusetshenziswa kwezindlela intelligence izinhlelo;
- multimedia uxhumano ubuchwepheshe. Zonke lezi izinhlobo ngenkuthalo esetshenziswa.
Izinhlobo ubuchwepheshe ukuhlukanisa uhlobo interface yomsebenzisi: WiMP-interface umyalo, ubulembu nabanye. Ngaphezu kwalokho, kunezinye ongakhetha kwehlukana.
Kucatshangelwe degree of nokuxhumana kwendawo, okutshengisa ngezinga elithile futhi uhlobo ukusetshenziswa Computing amanethiwekhi. Izinhlobo zolwazi izinhlelo by indlela yekusetjentiswa kungenzeka ezintsha futhi bendabuko. Futhi zokuxhumana amasu basuke basakaza, multi-level kanye lendawo. Izinhlobo zolwazi nobuchwepheshe zincike enokudla izizinda, isibonelo, yasebhange, ezimali, umshwalense imisebenzi, imisebenzi iziphathimandla zentela kanye nezinye izinhlobo. Inxanxathela izindlela lobuchwepheshe ukuqinisekisa ukuthi kuphela yakhiwa izindlela zokuxhumana, kanye yenhlangano imishini computer. Kufanele sicabangele imiqondo le.
Ngesisekelo izindlela lobuchwepheshe aphume ashone ubuchwepheshe bama-computer izindlela, okuyinto kuthambekele ukucutshungulwa kanye nenguquko nezinhlobo ezahlukene idatha asetshenziswe izizinda ezingafanele. Imishini zokuxhumana ihlinzeka inqubo ulwazi ukudluliswa kanye nedatha lokushintshisana nge imvelo bangaphandle, okubandakanya ukusetshenziswa kobuchwepheshe lahlukene lasetjentiswako usebenzisa imishini computer ezihlanganisa. hardware yenhlangano igxile imishini ezishintshayo imisebenzi ehlukahlukene emikhakheni ezingafanele.
Kukhona elithi ezifana amathuluzi kolwazi nobuchwepheshe, esithathwe ngaphansi okufanele kusho isofthiwe lobuchwepheshe kanye eziyinkimbinkimbi, okuvumela ukwakha izinhlelo eziyinkimbinkimbi nge izici ezahlukene kanye namakhono.
It kuvela ukuthi okwamanje kunezinhlobo ezahlukene kolwazi nobuchwepheshe, okuyinto kabanzi ahlukahlukene imikhakha yomsebenzi.
Ungagijimi regedit - yini okumele ngiyenze?
Isiphathi somsebenzi kukhutshazwe umlawuli wakho - lokho kusho ukuthini?
Isitoreji Data: idivayisi iphinde ukusetshenziswa
Ukuxhuma idrayivu yenethiwekhi
Umuthi 'collagen ultra "impilo yakho
Ne-IPTV Isethaphu "Rostelecom". iziteshi ne-IPTV
Ibhuleki lesandla. Isidingo kwesithiyo?
Silungiselela imenyu Ukudla: ikhalori inkukhu ethosiwe
ICommunist Party of Social Justice: umlando, abaholi Uhlelo
Umlingisikazi ULyudmila Makarova: Biography, ukuphila siqu. movie aphezulu
Isitshalo se-desert saxaul. I-Saksaul: isihlahla sogwadule